Olee otú ọcha a ngwa ngwa na-eme na kọmputa
> Resource> ihichapu> esi ọcha Up a ngwa ngwa Ịrụ Computer
Olee mgbe ị na-ọcha na kọmputa gị otu ugboro, ma ọ bụ mee na ị maara otú ọcha kọmputa? Of-akpata, m na-adịghị ekwu okwu banyere nhicha mputa na m na ị niile kpochapụrụ kọmputa gị dị ka dị ọcha dị ka ihe ọ bụla n'ụlọ gị. Lee, m na-ekwu okwu nke ike mbanye, dị ka junk faịlụ, caches, kuki, wdg, nke na-akwakọba na kọmputa gị n'elu afọ na afọ. Ọ bụrụ na ị dịghị mgbe ọcha gị PC dị ka nke a, ọ ga-dọkpụụrụ ala site arụmọrụ-anwụrụ unyi, ọbụna na ị nwere oké kọmputa. Ihe unu kwesịrị ime mgbe ị na-nhicha kọmputa?
1. Doro Anya n'elu ụfọdụ ohere na draịvụ ike
2. Defragment draịvụ ike gị
3. Uninstall na-abaghị uru ma ọ bụ omume na ị adịkarịghị eji
4. Wepu junk faịlụ, caches, kuki
5. rụkwaa ndekọ njehie
E nwere ụdị dị iche iche nke redundancy na kọmputa gị, na ị chọrọ ọcha ha na etiti oge, iji hụ na a oké arụmọrụ maka PC gị. Ozugbo ị chọta gị na kọmputa-agba ọsọ ngwa na mmemme na-amalite na-eme nwayọọ nwayọọ ma ọ bụ ọbụna adịghị eme, ọ bụ oge ịrụ a kọmputa ihicha. Iji belata ihe ize ndụ nke na-eme nke a aka, dị ka ndekọ, Ị na-mgbe aro dezie ya site onwe gị, ị pụrụ iji a kọmputa Cleaner software, dị ka Wondershare 1-Click PC Care, nke nwere ike idozi niile aga-eme n'elu na otu oge na otu click, na-azọpụta oge dị ukwuu n'ihi na ị na-eme ha otu otu na nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Na-agba ọsọ a PC Cleaner software na kọmputa gị, mgbe echichi na-agwụ agwụ. Ọ ga-akpaghị aka iṅomi kọmputa gị, chọpụta nsogbu nile ẹdude na PC gị na, na ike metụtara akụkọ tinyere ndụmọdụ kasị mma maka onye ọ bụla ihe dị ka n'okpuru.
Nke a mkpirikpi nchịkọta egosiputa ugbu a ọnọdụ gị na kọmputa na arụmọrụ, kwụsie ike na nche. Ị nwere ike ele nkọwa ndị ọzọ site ịlele ahụ "More", ma ọ bụ na ịpị catalogs na ekpe. Ihe ị chọrọ ime bụ naanị otu Pịa na "Idozi Ugbu a" button. Mgbe ahụ, ị ​​na kọmputa nwere ike kpochara elu kpamkpam na n'enweghị.
Ihe bụ na otú ndozi Kernel32.dll Error
Olee otú Hichapụ-adịbeghị anya na iPhone